Xiaomi သည် Wuhan တွင် စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရန် ယွမ် ၂ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည် - Pandaily
တနင်္လာနေ့၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း သတင်းအချက်အလက်Wuhan Yibaling Enterprise Management Co., Ltd. ကို မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ် ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ၁၃. ၅ သန်း) ဖြင့် တည်ထောင် ရန်အဆိုပြုထားသည်။ ၎င်း ၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် မှာ Lin Yonglin ဖြစ်ပြီး သူ ၏လုပ်ငန်း နယ်ပယ် မှာ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ခံ နှင့် သတင်းအချက်အလက် အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှု များဖြစ်သည်။ ရွယ္ယာ ရွင္ ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြအရ ဒီ ကုမၸဏီကို Xiaomi Company က အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Xiaomi အေနနဲ႔ စီးပြားေရးကို အားျဖည့္ ဖို႔ ရည္ရြယ္ တာျဖစ္ၿပီး Xiaomi ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ ေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ထို့အပြင် Xiaomi ကိုတည်ထောင် သူနှင့် ဥက္က chairman ္ဌ Lei Jun သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Ray ဟာ Xiaomi ကို မတည္ ေထာင္ ခင္က စြန္႔ ဦး တီထြင္ မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈ အပိုင္း ေတြမွာ ထူးခၽြန္ စြာ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီ မတိုင္ခင္ ကေတာ့ Xiaomi ဟာ ဒီႏွစ္ ရဲ႕ တတိယ သံုးလ ပတ္ ဝင္ေငြ အစီရင္ခံစာကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ Xiaomi သည် တတိယ သုံးလပတ် အကုန်တွင် ကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၃၆၀ ကျော် တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း စာအုပ် သည်ယွမ် ၅၉. ၁ ဘီလီယံ ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ တတိယ သုံးလပတ်တွင် ကမ္ဘာ့ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် တရုတ်၏ နည်းပညာ စက်မှုလုပ်ငန်း စျေးကွက် ၏ မျှော်လင့်ချက် များ အားနည်း လာခြင်း ကြောင့် Xiaomi ၏ ရေရှည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သည် အကျိုးအမြတ် နှင့် ဆုံးရှုံးမှု များတွင် မျှတသော တန်ဖိုး ဖြင့် ပါ ၀ င်သည်။ ၃. ၅ ဘီလီယံ ယွမ် ငွေရေးကြေးရေး ဆုံးရှုံးမှု အပါအ ၀ င် စာရင်း ၀ င် ကုမ္ပဏီများ ၏တန်ဖိုး မြင့်တက် မှုကြောင့် အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi Automobile သည် Beijing Yizhuang စက်ရုံကို အဆင့်နှစ်ဆင့် ဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုS
ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာတွင် Xiaomi ၏ မျှတသော တန်ဖိုး အမြတ် နှင့် ဆုံးရှုံး မှုသည် မျှတသော တန်ဖိုး ဖြင့် ၁ သို့ကျဆင်းသွား ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Q3 ဟာ ယခင္ႏွစ္ အလားတူ ကာလက ယြမ္ ၃ ဒသမ ၄ ၁၇ ဘီလ်ံ နဲ႔ ယွဥ္ ရင္ ယြမ္ ၉ ၇၆ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ Q2 ကေတာ့ ယြမ္ ၄ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆန့်ကျင်ဘက် အနေဖြင့် Xiaomi Q3 သည် အပြုသဘောဆောင်သော အမြတ် ငွေ ယွမ် ၄၅ သန်း၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၁၀ သန်းနှင့် Q2 ယွမ် ၂၆ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။